Oovimba be-AUD / NZD
Udidi: Aud / NZD
Ukuqhubela phambili kwe-AUD / NZD!
I-AUD / NZD inyuke kangangezinga le-1.0947 emva kokuphuma kwipateni yokuqhubeka encinci. I-bias iyakhuthaza njengoko isibini sisilele ukuqinisekisa isigaba sokulungisa kwixesha elifutshane.
Esi sibini sidityanisiwe emva kwesantya sokugqibela sokugqibela kwaye ngoku kubonakala ngathi sizimisele ukuphinda sibuyele phezulu. Ngokobuchwephesha, asinakho ukubekela bucala into encinci, yethutyana, ukwehla njengoko inqanaba linokubuyela ezantsi ukuvavanya kwaye siphinde sibuyele imiqobo eyaphukileyo ngaphambi kokuba sitsibe ngaphezulu.
Uhlalutyo lweTshathi yeH1!
I-AUD / NZD ibhalise ukuphuma okufanelekileyo okusuka kunxantathu omncinci ohambelana nomqondiso wokunyuka okuphezulu. Iye yatsiba ngaphezulu komgangatho ophezulu wamaMedian (UML) owawumele uxhathiso olunamandla.
Ukuvala ngaphezulu kwe-1.0937 yangaphambili ephezulu kungaqinisekisa ukuba i-AUD / NZD kufuneka itsibe phezulu kwiintsuku ezizayo. Njengoko ubona kwitshathi ye-H1, i-AUD / USD yehlulekile ukuzinza phantsi kwenqanaba lePivot Point (1.0876) ebonisa ukuba ixabiso linokusondela kwaye lifikelele ubuncinci kwi-R1 (1.0972).
I-AUD / i-NZD ihlanganisiwe kwixesha elifutshane iqinisekisa ukuphuma kwayo kunxantathu omncinci olinganayo. Umbono uhlala unyanzelekile ukuba ixabiso liya kuthengiswa ngaphezulu kwe-1.0891 yangaphambili ephantsi.
I-R1 (1.0972) kunye ne-R2 (1.1033) zibonwa njengeethagethi ezinokubakho. Ukukhula okukhulu kuya kungqinisiswa luphulo olusebenzayo ngaphezulu kwe-R1.
tags Aud / NZD, Uhlalutyo Technical, Ingcinga yokurhweba
I-AUDNZD ibuyela umva kwindawo ephambili
I-AN idibanise i-4.11% (428 pips) ukusuka ezantsi ukuya phezulu ukusukela oko kwaqala ukubuyela ngoDisemba 2020.
Iwile ngoku i-1.50% okanye iipips ze-165 ukuphinda iphinde ithengise indawo yorhwebo kwindawo engaphambili yentshukumo eyakhiwe kakuhle.
Ixabiso ngoku lenze amanqanaba aphezulu aphezulu nangaphezulu ngokuqhekeka ngeyure kunye nolwakhiwo ngelixa lixhaswa yi-200 sma.
Sijolise ekubuyiselweni ngokutsha okungama-50% okuhlangana nepivot yemihla ngemihla kunye nomda ophambili olandelayo.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-7 kaDisemba
I-AUD / NZD ithengise ngetoni encinci ye-bearish kwiseshoni yokuqala yaseYurophu ngoMvulo, njengoko ibirhoxa kwiveki ephelileyo yenkunzi yenkomo.
Kwangoko namhlanje, i-China ipapashe ibhalansi yezoRhwebo ngo-Novemba, eyahlula ukulindeleka kweemarike ezingama-53.5 yezigidigidi yaza yangena kwi-75.4 yezigidigidi zeedola. Ilizwe laxela ukuba ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunyuke nge-21% kulo nyaka.
Ngaphandle kwedatha yokuqhubela phambili evela e-China, i-Aussie kunye ne-Kiwi bahlala bengashukumi ngokuchasene nezinye iimali, kuba abatyali mali banqanda ukuthatha naziphi na izinto zokubheja ezinoburharha ngoMvulo.
Okwangoku, zozibini iimali ezihlanganisiweyo kwiveki ephelileyo njengoko imeko yemngcipheko weemarike zehlabathi iphakanyisiwe, kulandela uphuhliso oluqinisekileyo lokujikeleza izitofu ezinokubakho ze-COVID-19.
Kwezinye iindaba, iBhanki enguVimba yase-Australia (i-RBA) igcine iirhafu zayo zingatshintshi kwiveki ephelileyo njengoko bekulindelwe. Ibhanki ephezulu ishiye ireyithi yayo yemali kwirekhodi ephantsi ye-0.1% kwaye ikwagcina inkqubo yayo yokunciphisa imali eyi-A $ 100 yezigidigidi.
Abarhwebi baya kuba bejonge phambili kwiNkomfa yeBhanki yeLizwe yase-Australia kunye ne-Q3 yexabiso leNdlu yexabiso leNdlu ukusukela ngomso ukuze babone izinto ezinokwenziwa sesi sibini.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-7 kaDisemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0600, 1.0650, kunye ne-1.0700
Amanqanaba okufuna: I-1.0520, 1.0480, kunye ne-1.0400
I-AUD / NZD irekhodishe ukubuyela umva kancinci kwiveki ephelileyo yokwaliwa kwisiseko sesiteshi sethu esihla kufutshane ne-1.0400.
Ngexesha lokushicilela, esi sibini sibonile ukubuyela umva kwinqanaba lamaxabiso le-1.0520, apho sinokuthi sibone khona ukubuyela phezulu kumjelo wethu wehlayo 1.0650. Nangona kunjalo, ikhefu elingaphantsi kwendawo ye-1.0520 yenkxaso linokubangela ukuthengisa okutsha okujikeleze i-AUD / NZD.
tags Aud / NZD, Forex, iindaba